पुन्टा डे हिडाल्गो अभिलेखागारहरू - एट्लास टेनेरिफ - घर जग्गा
AmaZING दृश्यको साथ स्टाइलिश घर समुद्रबाट 300 मी !!
बिक्रीका लागि: पुन्टा डेल हिडाल्गो, टेनेरिफमा उत्कृष्ट समग्र सम्पत्ती !! समुद्री, बलुवा समुद्र तट, स्थानीय रेस्टुरेन्ट, फिशिंग पोर्ट र टापुको उत्तम सर्फ स्पटहरू बाट केहि मिनेटमा उत्तम स्थान !! सूर्य र भव्य दृश्यहरूले भरिएका उच्च सीलिंगसहित २ फ्लोरहरूको घर !! सानो परिमार्जन गरेर यो सम्भव छ […]
आरामदायक पुरानो फिशिंग पोर्ट अपार्टमेन्ट!
बिक्रीको लागि: विशाल भू-तल्ला अपार्टमेन्ट सीधा समुद्र र पुरानो फिशिंग पोर्टमा। पुन्टा डेल हिडाल्गो। ला लगुना, टेनेरिफ। सागरबाट meters० मिटर। भर्खरै मर्मत गरिएको उच्च छत र आँगन! गर्मी गर्मी मौसम वर्ष दौर। धेरै राम्रो माछा रेस्टुरेन्ट २०० मीटरमा प्राकृतिक पोखरी। तपाईंको डु boat्गालाई पोर्टमा दायाँ पछाडि राख्नको लागि सम्भाव्यता […]